Tele RELAY တစ်ခု - Kylie Jenner, "အံ့သြဖွယ် mom," Travis ဖြစ်သူ Scott နှင့်အတူသူမ၏လိင်ဘဝအကြောင်းကိုရင်ဖွင့
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Kylie Jenner," အံ့သြဖွယ် mom, "Travis ဖြစ်သူ Scott နှင့်အတူသူမ၏လိင်ဘဝအကြောင်းကိုရင်ဖွင့
လေဒီဂါဂါမေမေနဲ့ရည်းစားမေတ္တာ၌အလွန်များစွာ Kylie Jenner အဓိကအားတစ်ပွညျ့စုံစအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ဖို့သဘောတူ Playboy မဂ္ဂဇင်း၏နိုဝင်ဘာလကိစ္စများအတွက်ဝတ်လစ်စလစ်ရှိုးသူမရဲ့သတို့သမီး၏မွေးဖွားချိန် မှစ. သူမ၏လိင်ဘဝအကြောင်းကိုသူမလည်းထိနျးခြုပျယုံကြည်မှုအရာပါ။ "လူအတော်များများဟာကလေးရှိခြင်းသည်သင်၏လိင်ဘဝကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုတောင်းဆိုပေမယ့်ငါကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းခံစားရ, ကရှင်းပြခဲ့သည် Kylie Jenner. ဟုတ်ကဲ့, ကျနော်တို့ကကောလာဟလမှားယွင်းသောခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့သက်သေပြကြပြီခံစားရပါတယ်။ "
သူမ၏အိမ်ထောင်ရေးမှာမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်, Kylie Jenner ပင်မီးကြေညာချက်ဖို့လမ်းပေးတော်မူပြီ Travis ဖြစ်သူ Scott. "သင်ဟာမိခင်နှင့်လိင်အတူတကွနိုငျသောကြှနျုပျကိုသတိပေးသင်မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးသို့မဟုတ်တစ်မကောင်းတဲ့မိခင်နေလိင်ပျော်မွေ့သောကွောငျ့မယ့် လျော့ရဲရဲ အငယ်ဆုံးဘီလျံနာ ကော်လံ Playboy. သငျသညျ sexy ဖြစ်ဆဲအံ့သြဖွယ် mom, ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောအဂ္ဂိရတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အတူတကွပျော်စရာအများကြီးရှိသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါပဲ။ အဆိုပါအတက်အကျမှတဆင့်ကျနော်တို့အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ ငါတို့သည်ကိုယျ့ကိုယျကိုခိုင်ခံ့စေ။ "
သောကြာနေ့ 13 စက်တင်ဘာလ Kylie Jenner Playboy များအတွက်သူမ၏ရိုက်ကူးရာမှအချို့ sexy ဓာတ်ပုံများ shared ။ အားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး ဆာရှာ Samsonovaငယ်၏အဘဖြစ်၏ မုန်တိုင်း သူကအနုပညာလမျးညှနျခ၏စောင့်ရှောက်မှုခံယူလေ၏။ နှင့်နှစ်ဦးစလုံးဟာရက်ပ်သည်သူ၏ချစ်သူတို့ sublimate နိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာအနီရောင်အတွင်းခံထဲမှာကျင့်ခြင်း pose ပွားအလွန်ငယ်ရွယ်ဘီလျံနာ, အဖြူရောင်သို့မဟုတ်ဝတ်လစ်စလစ်ခန္ဓာကိုယ်, သူမ၏ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးအုပ်ရိုးရှင်းစိုစွတ်သောအထည်ကိုပြသသည်။ "ကောင်းကင်တမန်၏စွမ်းအင်ကို"သူသည်ဤလောင်မီးကျပုံစံဖို့ key မှာကပြောပါတယ်။ "သင်နိုင်အောင်လှပသော Kylie နေပါပြီ! "wow wow wowKhloé Kardashian ရေးသားခဲ့သည်။
Travis ဖြစ်သူ Scott, မုန်တိုင်းထန် Webster, Kylie Jenner - Kylie Jenner docume ၏ပထမဦးဆုံးမိသားစုတက်ရောက်
မင်္ဂလာမွေးနေ့မင်းသားဟယ်ရီ! မိမိအမွေးနေ့၏အခါသမယတွင်သူမ၏ခင်ပွန်းရန်ရွေ့လျားအခွန်ဆက် Meghan 35e